Thwebula Tixati 2.51 Standard futhi Portable – Vessoft
Tixati – client enamandla ukulanda futhi wabelane amafayela sesifufula. Isofthiwe ikuvumela ukuba ulungiselele ukulayisha namafayela athula, alawula thwebula eziseqhulwini, ukubuka ulwazi mayelana ifayela njll Tixati kwenza ukwenza ukuxhumana usebenzisa proxy kanye UPnP noma yezifiso UDP. Isofthiwe ikuvumela ukungena ku futhi bathole isilinganiso kusukela athula isamba esikhulu ulwazi sesifufula. Tixati ibusa sakugcina system imithombo futhi evelelwa okulula ukuyisebenzisa interface.
Ukulandwa kanye nokwabelana amafayela sesifufula
Ukusekela for uzibuthe-links
Amazwana on Tixati:
Tixati Ahlobene software:
Sesifufula Ithuluzi elinamandla ukulanda amafayela sesifufula. Isofthiwe isekela imisebenzi eyisisekelo amaklayenti sesifufula futhi likuvumela kuqala amafayela soxhumanoningi.
Sesifufula The popular iklayenti sesifufula ukulanda futhi wabelane amafayela kwi-inthanethi. Isofthiwe ine imisebenzi ewusizo futhi ikuvumela ukuba ukuxhuma anezele.
English, Afrikaans, Українська, Français... BitComet 1.45
Sesifufula Isofthiwe ukulanda amafayela kusuka amanethiwekhi sesifufula FTP amaseva. Isofthiwe kwenza ukulanda amafayela amaningi ngesikhathi esisodwa bese kuqala kubo.
Sesifufula Isofthiwe ukulanda futhi wabelane amafayela inethiwekhi BitTorrent. Isofthiwe iqukethe izilungiselelo nezimo of the thwebula kanye layisha of amafayela izidingo yomsebenzisi.
English, Українська, Français, Español... Hal 6.1.7603
Sesifufula Ithuluzi eliwusizo search esheshayo nephumelelayo amafayela sesifufula on the internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukucinga amafayela akhethiwe abathungathi sesifufula.
Sesifufula Easy ukusebenzisa iklayenti sesifufula for the ukwabelana ifayela phezu Internet. Isofthiwe ikuvumela ukulanda noma bethule okuqukethwe in amanethiwekhi ehlukahlukene sesifufula.
English, Afrikaans, Українська, Français... BitLord 2.4.4.312
Sesifufula Ithuluzi ukulanda futhi wabelane amafayela ne extension .torrent. Isofthiwe iqukethe uhlu popular amafayela emidya futhi isimbelwa search engine.
Waterfox 50.1 Stable futhi Portable
-Internet isiphequluli seWebhu olusekela CSS futhi HTML namazinga eziphambili. Isofthiwe has a lot of amathuluzi ukuhlala ngempumelelo in inethiwekhi.
Downloaders Isofthiwe ukulanda amafayela kusuka video amasevisi kanye sites nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe baxhumana iziphequluli ethandwa kakhulu futhi isekela umsebenzi wasithatha ukusakaza ividiyo.
English, Afrikaans, Українська, Français... Cheat Engine 6.6
Sandboxie 4.2 futhi 5.07 beta
Abanye Ithuluzi ukugijima isofthiwe endaweni ecezile virtual. Isofthiwe evimbela wokusindisa idatha kwi umsebenzi izicelo running in yimuphi USB ulwazi.
Office Isofthiwe usebenza nge amafayela ehhovisi lika ngetakhiwo letehlukene nekukhetfwa has a ukusebenza abalulekile futhi iqukethe iqoqo izifanekiso itholakale.
English, Français, Español, Deutsch... FurMark 1.17
Testing Isofthiwe ivivinya ikhono amakhadi video. Isofthiwe iqukethe Umbuso esakhelwe in ukubonisa ukwaziswa okuningiliziwe mayelana nemingcele amakhadi video.